Karana tompon’ny Caromad : efa fanindroany nokasain’ny jiolahy nalaina an-keriny | NewsMada
Karana tompon’ny Caromad : efa fanindroany nokasain’ny jiolahy nalaina an-keriny
Par Taratra sur 06/01/2017
Tsy mbola votsotra ilay Karana, Amine Dinmamod, tompon’ny orinasa Caromad, hatramin’ny omaly, raha efa roa andro izy no tany am-pelatanan’ny jiolahy.
Tsy mbola nisy fitoriana nipetraka any amin’ny polisy raha ny fantatra. Raha ny vaovao azo, efa fanindroany nisy nikasa haka an-keriny ity Karana ity. Efa nisy aza ny anarana nandeha tamin’izany fa ny tarik’i Lama, mpanao kidnapping nalaza tamin’ny taona 2005 sy 2006, no nikasa hanao izany. Ity afakomaly ity, lasan’ireo jiolahy tokoa izy io.
Teo amin’ny tokotanin’ny orinasa mihitsy no nalain’ireo jiolahy an-keriny ity Karana ity. Voalaza fa dimy lahy nirongo basy ny naka azy, raha izy tao anatin’ny fiara Mercedes Benz. tokony ho tamin’ny 5 ora sy 45 minitra teo ny nisehoan’izany.
Voalaza anefa fa misy zandarin’ny Gsis roa lahy miandry azy ity, ary manaraka azy hatrany. Tsy nisy fifanoherana, na poa-basy anefa nandritra ny fakana an-keriny ilay Karana ity. Tao anatin’ny fotoana fohy ny nisehoan’izany. Tsy voalaza anefa raha tsy teny an-toerana ireo mpiambina manokana ireo.
Andrasana izay vokatry ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana. Raha ny tokony ho izy, misy camera de surveillance eny amin’ilay orinasa ka mety ho voarakitra an-tsary ny zava-niseho.
Fakana an-keriny karana voalohany tamin’ity taona ity izao teny amin’ny Caromad izao. Efa nisy roa ihany koa talohan’ny faran’ny taona. Ny iray, efa votsotra ary hita teny Ambohidratrimo; ny iray, tsy nahazoam-baovao. Efa nisy Karana atidoha ihany koa voasambotra amin’ny fakana an-keriny ary efa any Tsiafahy. Andrasana ny tohin’ity raharaha ity.